Tatiana Vasilieva - ubomi bomntu, i-biography, abantwana, iplastiki, iifoto ngaphambi nangemva. Ubudlelwane phakathi koTatiana Vasilyeva noSadalsky
Emva komdlalo we-cinema waseRussia kunye neTateryana Vasilieva ─ amafilimu angaphezu kwe-90, iimveliso ezininzi zeemidlalo, izinto ezininzi zokudibanisa, ukubhala iikhathuni kunye neefilimu, ukufowunelwa kwiimpawu. UMyalelo weNhlonipho uhanjiswe kumfazi omhle, uMculi wabantu beRussia Federation nguVV. Putin. Abantwana bakhe balandela inyawo lomama babo baza badutshulwa kwii-movie. Kunzima ukukholelwa, kodwa kungekudala abantu abazithandayo baya kuba neminyaka engama-70 ubudala. Akukhona malunga neeplastiki okanye iigesi: Ubomi bomntu kaTatyana Vasilieva bugcwele iziganeko ezingenaso ixesha lokukhula. Kwi-actress, amadoda ahloniphekileyo kweli lizwe athandana nothando. Ngapha emva kokuphazamiseka kobuchule bobudlelwane kunye noVasilyeva, uStanislav Sadalsky wavuma: akazange ayeke ukumthanda ngomzuzwana. ULilya Brik weza kwimidlalo yeVasyeyeva, ekhangeleka ngokukhatywayo umdlalo womculi. Abadlali abahle kakhulu kwi-cinema ye-USSR baba ngabayeni bakhe. Bobabini bomtshato wesifazane baqhawula umtshato, bobabini abantwana babonakala-unyana kaFilipu nentombi uElizabhete.
Biography kaTatiana Vasilyeva
UTanya wazalwa ngowe-1947. Unomnye udade odala, uAna. Ubaba ka-actress wayenguLensrad locksmith elula, indoda enomdla kakhulu. Kwakuvela kuye into encinane iTanchka yafumana yonke into enomdla wayo, ikharityhulam kunye nokuzonwabisa. Umculi wamama, uqoqosho, ubude nobugcisa. Naphezu kokuvela kwayo, intombazana yathathwa yinkqubo yemidlalo, yaba yinto ebonakalayo ngokugqithiseleyo ngomdlalo. Ngokukhawuleza ekuqapheliseni ukuba le nto yayimlungiselele indima yomculi, uVasilyeva wanquma ukuhlala ehlekisayo. Nangona ubude bayo (176 cm) kunye nomntu ongeyena, onobunzima, udlale ngendlela enjengokudala umfanekiso ococekileyo. Ukungena kwiSikolo-Studio se-Moscow Art Theatre, le ntombazana yayinesiqiniseko sokuthi uza kuzibulala xa engazange adlule ukhuphiswano. Emva kokuphumelela ngempumelelo iimviwo kwaye wasinda, ngowe-1969 umfundi waphumelela ngokuqhafaza waza waqala ukusebenza kwi-Satire Theater. Umdlalo wokuqala wawudlala "ixesha lokuthunjwa." Emva kokusebenza apho kude kube ngo-1983, wathuthela kwi-Theatre ye-Mayakovsky. Kamva kwakukho "Itheyetha ye-Modern Play", i-Art Salon Theatre, i-arhente yaseshashalazi, ukudubula kwefilimu ...
UTatiana Vasilieva kwifilimu ethi "My Moryachka"
UTatyana waqala ukufowunelwa ngo-1972, edlala kwiifilimu "Khangela Ubuso", "Okwesine". Emva koko kwakukho "Unina, ndingumama wakho", "uAdam uthabatha uEva", "Owona mnqamle kwaye okhangayo", "Umsanqa wam", "I-Odeon entsha", iindidi zee-TV ezithandwayo (Ivan Podushkin ..., Isikolo esivaliweyo) "Sonata for Faith" ... Ukuphindaphinda kwamafilimu kunye neethathu, imisebenzi yefestile, ukuqhutyelwa kweefilimu ezizeleyo zithatha ubomi bonke bezobugcisa obungabonakaliyo.
Ubomi bomntu kunye nabantwana bakaTatyana Vasilyeva, ifoto
Umdlali we-actress uzibiza ngokuba ngumdla, kwaye uyawa thandana ngokukhawuleza aze aqale ukwakha into enomdla. Kamva, ekuqapheliseni ukuba umfanekiso owenziwe nguye awukude neyona nyaniso, udimazekile. Kungenxa yolu hlobo lobomi bukaTatiana Vasilieva yayinemvanoveli eninzi, imitshato, ekugqibeleni ukuqhawula umtshato, ngokuthandana. Umfazi wakhe wokuqala, u-Anatoly Vasiliev, uTatyana Iskikovich (igama leentombazana le ntombazana), wathatha ixesha elide kwaye wazi kakuhle.
Umyeni wokuqala kaTatyana Vasilyeva
UAnatoly wamhleka kakhulu, kodwa wadibana nento enjalo. Emva komtshato, waba ngumyeni kaTanya, wayeka ukuhleka umfazi wakhe: ubomi buqhekeza ukukhululeka kobudlelwane. Umtshato waqhekeka, kodwa akazange abe yintlekele. Ukusuka kumyeni wakhe wokuqala ukuba abe ngumdlali we-actress kuze kube phakadze ube ngumnxeba, okwamenza udumo kunye nendodana kaFilipu. Ngomtshato wesibili kwakubuhlungu kakhulu. Ukuqhelana nomdlali uGeorgy Martirosyan, ekufumaneni kwakhe, uVasilyeva wayecinga ngokuzibulala.
Umyeni wesibini uTatyana
Emva kokuba ayeke ukutya, wayedlulisela abantwana kwiintsapho (ukusuka kumtshato wesibini umfazi wayenentombi). Abantwana baye bamisa umama kwisinyathelo esona sibi kakhulu ebomini. Namhlanje, abantwana baqhubeka begcina uTatiana Vasilieva kwiingcamango ezilukhuni, ekunika unxibelelwano nabazukulwana bakhe. Ngamanye amaxesha uFilipu noLisa bahlambalaza unina ngenxa yokuxhamla .
Kwisithombe abantwana bakaTatyana Vasilyeva
U-Tatiana Vasilieva uzinikezela ubuchule, edla ngokulibala abantwana. Abantwana bakhe - abantu abadala abantu abadala - bahamba ezinyaweni zenina, badibanisa isithuba ngokubamba.
Unyana kaTatyana Vasilyeva
Intombi kaTatyana Vasilyeva
Ubudlelwane phakathi koTatyana Vasilyeva noStanislav Sadalsky
Omnye wabahlobo abasondeleyo bomdlali, uStanislav Sadalsky, ngokubukhali kwakhe, ubiza umnyana wakhe nentombi yakhe uVasilyeva "izipongo."
UTatyana Vasilyeva noStanislav Sadalsky
Kananjalo akavumelani nalokhu, esithi "u-Stas ngokwakhe ufuna ukugcinwa" nangona kukho konke ukunyaniseka kunye nokunyaniseka komculi. Namhlanje bathetha ngokuhlukana kwe-creative tandem Sadalsky-Vasiliev, kodwa le ndoda iyaqhubeka iqinisekisa ukuba uyayithanda le ntombazana enhle, nangona ayinayo "imibhede". Ngenxa yakhe, umdlali we-actress ufuna ukugqoka, ubonakale esemncinci kwaye ekhangayo, nangona epapashwe ngokuphindaphindiweyo imifanekiso engabonakaliyo yomdlali. Nguye kuphela ohlawulela uTatyana Vasiliev kwiivenkile zokutya, enomdla kwaye engathandekiyo, ehlala enika wonke umntu iholide kunye nezipho.
UTatyana Vasilyeva noStanislav Sadalsky kwinqanaba
UTatyana Vasilyeva noStanislav Sadalsky kule midlalo
I-Tatiana Vasilieva - ifoto evuselelwe ngaphambili ngaphambi nangemva kweeplastiki
Ukutshintsha indima, uTatiana Vasilieva utshintshile kunye nemifanekiso yakhe, ngaloo ndlela liba lixesha eliphantse lingacatshulwa. Ukunyuka kweenwele ezigqithiseleyo "ngaphantsi kwe-zero," ngoko i-hairstyle ibhinqa, ukuveliswa okuqaqambileyo okanye ukuphela kwayo. Akakwazi ukuba nomona, akayi kuqwalasela umnyaka, kwaye wamkhumbula nje ubudala bakhe. Ebudeni bakhe, umdlali wecala wayengenakonwaba ngokubonakala kwakhe, kwaye wayenentloni. Nangona kunjalo, phantsi kwetazi ye-plastic surgeon, lona wesifazane wagqiba ukulala phantsi, sele eqala ukuba ngu-ugogo.
UTatyana Vasilyeva phambi kokuhlinzwa ngoplastiki, ifoto
Ukuthatha isigqibo sokuba "umelana" nobudala, lo mfazi waya kwi-plastic surgery. Okokuqala, watshintsha umlo wempumlo kunye ne-cheekbones, kamva walungisa umgca we-chin. Nangona iiplastiki yokuqala zaphantse zabulala abantu abazithandayo, umdlali we-actress wahlangabezana nale nto, eselula kwaye uyaqhubeka esothusa ama-albhamu ngokukhawuleza kunye nobuhle bakhe.
Tatiana Vasilyeva emva kweeplastiki, ifoto
Iindaba zakutsha zamhlanje malunga noTatyana Vasilyev
Namhlanje, umdlali wesigxina uthi unoyolo ngakumbi kuninzi kwaye uphantse yonke into, kodwa uhola "indlela ebomileyo yobomi". U-Tatiana Vasilyeva ukhumbuza ngokwakhe nge-robot-automaton: ukucoca, ukuqeqeshwa, iindiza ezindizeni, izitimela, iibhasi, iindwendwe kunye neendwendwe ... konke ngokucwangcisa, ngaphandle kokuphumla. Ekuzigxekeni kwayo, kuqhubeka ngakumbi, ekuphikisana ngokuthi akukho mntu umele, ngaphandle nje ngokuba "ngumculi olungileyo". Kukho umboniso: UVasilyeva ngumfazi ongenazo izakhiwo. Ngamanye amaxesha umdlalo wakhe wezemidlalo uloyikisa. Abafaki bomdlali abalingiswa bacinga ukuba bayazi malunga nezinto abazithandayo phantse yonke into, kodwa ayikho. UVasilyev ubizwa ngokuba yi-"female-holiday": unomdla, unomdla, uqaqambile.
UTatyana Vasilyeva kwi-cinema
Wayefunda nje ukuzama yonke into ngokwayo, ukutshintsha ngokoqobo imihla ngemihla: loo nto ikhuselekileyo kwaye inobungozi, ibe yinto engathandekiyo, ingqungquthela, ihlaziyekile kunye neyobuhlungu, iyingozi kwaye imnandi ... nganye imifanekiso yakhe "ikhula" kumdlali omdala kwaye iba yincinci yobuntu bayo. Ngokuqhelekileyo malunga nabani na kwixesha elihloniphekileyo (cinga ukwethusa: kungekudala i-70!) Bhala izinto ezininzi malunga nobomi bomntu, izicwangciso, ukudubula kunye neendima, njengokuba zenza ngeVasilieva. Ubomi bakhe, njengalo mfazikazi omangalisayo, uguquko oluqhubekayo.
KuTatiana Vasilieva, ubomi bomntu siqu yindawo yokuzonwabisa kunye ne-cinema. Izibonakaliso zithatyathwa yiziganeko zangempela, zibeka eceleni intetho kunye nabantwana kunye namadoda. U-Tatiana Grigorievna ngokunyanisekileyo akaqondi ukuba unokufumana uvuyo "ebomnye" ubomi, engahambelani nomdlalo kunye nomdlalo. Akathathi ikhefu, akayi kuphumla kwaye akaze aphinde abuyele. Nangona ulwalamano alwakhayo kunye nabalingane (Sadalsky). Emva kweeplastiki, akazange athathe ukuphumla okufanelekileyo, eqhubeka ephazamisa abaphulaphuli ngemisebenzi emitsha kwi-cinema nakwinqanaba.
UOlga Buzova noDmitry Tarasov: ibali lomthando, uthando
I-Berry i-cobbler eneeperekisi
Ixesha elitsha "Izwi. Abantwana "?
Ukholo lomntu othandekayo nomnye
Ukuqhutyelwa kwipetrosi yaseSt. Petersburg - Buzova kunye neMakrevich kwakhona kwinqanaba le-scandal
Iibhatata ezibomvu ngeesibhakabhaka, i-bacon kunye no-anyanisi
I-Granite ukusuka kumango kunye nelime
Imiyalelo yobutsha, ubuhle kunye nobomi obude